I-Digital Tire Gauges Factory, ababoneleli |China Digital iTire ukulinganisa abavelisi
I-Digital Tire Inflator Gauge
• Igeyiji yeDigital tayara yokulinganisa inflation yenziwe ngendlu yeplastiki kunye nezinto ezakhelwe ngaphakathi zobhedu zimelana noxinzelelo oluphezulu.
• Isixhobo sokuvuthela umoya kunye nevalve yokukhupha umoya ngobhontsi
• Igeyiji yeDijithali yokunyuka kwamaxabiso ifikelela kwi-175psi / 12 Bar / 1,200kpa
• 20“(500mm) umbhobho werabha oxutyiweyo
• 3.5″ isibonisi se-LCD esikhanyiswe ngasemva
• Igeyiji ye-Digital tayara inflator gauge ivumela ufundo oluchanekileyo loxinzelelo lwetayara inceda ngokusebenza kokusetyenziswa nge-TPMS (iNkqubo yokuJonga iTyre Pressure Monitoring System)
• Isebenza kwisixokelelwano senitrogen
• Igeyiji yedijithali ye-inflation yamatayara egqunywe ngesikhuseli serabha
• Iibhetri ezi-2 ze-AAA, zibandakanyiwe
• Igeyiji yedijithali ye-inflator yetayara inezibane ezakhelwe ngaphakathi ze-LED ukuze zisetyenziswe kwiindawo ezibonakala zisezantsi
• Uluhlu: 3 ~ 145psi / 0.2 ~ 10 Bar
• Inikezwe ngepayipi lerabha eliyi-480mm kunye nesikrufu kwisiqhagamshelanisi
• Igeyiji yeDigital tayara inflator gauge inikwa amandla ziibhetri ezi-2 x AAA, eziqukiweyo
• Ilinganiswe kwiBar, PSI nekPa
• Cima umbane ngokuzenzekela ukugcina ubomi bebhetri kunye nesalathisi esisezantsi sebhetri
• Ivalve yokukhulula uxinzelelo
• 1/4″ NPT okanye BSP isiziba
• Igeyiji yedigital inflator gauge inikwe iadaptha yeplagi
Ipistol Ukubamba iTire inflator ngeDigital Gauge
● I-pistol grip grip tire inflator ene-digital gauge range ukuya kwi-120 psi / 10 bar ngokunyuka kwe-0.1 psi okanye i-0.01 bar kunye nokuchaneka kwe-± 1 psi / 0.1 bar okanye i-1% yesikali esipheleleyo.
● Kukho iiyunithi ezi-4 ezikhoyo: i-psi / kpa / bar / kg.cm2, enokutshintshwa ngokubamba iqhosha lasekunene kwiqela lolawulo.
● Iyunithi yakhiwe ngesiphatho se-ergonomic kwizinto ezidibeneyo, ezikhaphukhaphu kwaye zilungele ukuthwala.Isibambo seComposite sibonelela ngokumelana nomhlwa ngakumbi kunye nokumelana ne-oyile.
● Isixhobo sokufaka umoya kwitayara lokubamba ipistol esinegeyiji yedijithali siya kuzivula ngokuzenzekelayo xa siqhoboshela i-air chuck kwivalve yetayara kwaye silinganisa uxinzelelo lomoya (kungekhona ukugqabhuka kwetayara).Akusekho ukuqikelela ngeegeji ze-analog.Inomsebenzi we-backlight kwaye inokufunda ngokucacileyo nangona kumnyama.
● Ikliphu yohlobo lwechuck yetayara eyenziwe ngobhedu oluqinileyo, enokudityaniswa nayo nayiphi na ivalve yeSchrader.Imathiriyeli yobhedu ibonelela ngokumelana nomhlwa ngakumbi.
● 12 intshi / 30cm bhetyebhetye hose irabha.
Ubungcali beDigital yeTire Gauge
● OkuUbungcali beDigital yeTire Gaugeyi-3-230PSI inflator yedijithali ngokuchaneka kwe-± 1PSI kwaye ixhasa iiyunithi ezi-4 ezitshintshayo (PSI / KPA / Bar / Kg.cm2).Ingasetyenziselwa ukuvavanya uxinzelelo lwetayara, ukusuka kwiibhayisikili ukuya kwiilori ezinzima.
● OkuUbungcali beDigital yeTire Gaugeingabonisa ixabiso lovavanyo lwemizuzwana emi-2-3, elungele ukufundwa, akusekho ukuqikelela ngeegeji ze-analog.Inomsebenzi we-backlight kwaye inokufunda ngokucacileyo nangona kumnyama.Iza kuzicima ngokuzenzekelayo ukuba akukho msebenzi kwimizuzwana eyi-15 ukugcina amandla ebhetri.
● OkuUbungcali beDigital yeTire Gaugeixhasa imisebenzi ye-deflation.I-valve ye-deflation esecaleni inceda ukukhupha umoya woxinzelelo oluphezulu, kulula ukufumana uxinzelelo oluchanekileyo lwetayara lohlengahlengiso oluchanekileyo.Ukunciphisa ukudinwa kwamatayara kunye nokuphucula ukusebenza kwezithuthi.
● Le geyiji yedijithali yoxinzelelo lwetayara ine-360 ° yerubha yomoya yerubha kunye ne-swivel ball foot air chuck, umlomo wombhobho onzima unokujikeleza ukufikelela kwiivalvu zamatayara ngokulula & nokuguquguquka, okwenza kube lula ukudibanisa itayara kunye nevalve yeSchrader ngaphandle kokuvuza komoya.Kuyanceda ukwandisa ubomi bamathaya, ukuphucula uqoqosho lwamafutha, ukunciphisa umthwalo kwisithuthi, kwaye ikuvumela ukuba ukonwabele ukuqhuba kakuhle kunye nokuzinza.
Umgangatho weDigital Tire Gauge
● OkuUmgangatho weDigital Tire Gaugeuluhlu lwe-3-230PSI ngokuchaneka kwe-±1 psi kwaye ixhasa iiyunithi ze-4 (psi / kPa / Bar / Kg.cm2).Ingasetyenziselwa ukuvavanya uxinzelelo lwetayara kwiimoto, itrektara yengca, itrektara, i-SUV, i-Pick-up, iilori kunye nezithuthi ezinzima njl.
● IUmgangatho weDigital Tire Gaugeingabonisa ixabiso loxinzelelo lomoya wetayara kwimizuzwana eyi-15, akukho mfuneko yokuqikelela isebenza ngeegeji zoomatshini.Umsebenzi we-backlight wenza ukuba ifundeke ngokucacileyo nangona kumnyama.Iyunithi iya kuzicima ngokuzenzekelayo kwimizuzwana ye-15, ukuba akukho msebenzi, ukugcina amandla ebhetri.
● Igeyiji inemisebenzi yokunciphisa ixabiso.Ivalve ye-air bleeder kwi-stem inceda ukukhupha uxinzelelo oluphezulu kwitayara, kulula ukufumana uxinzelelo oluchanekileyo lwetayara lohlengahlengiso oluchanekileyo, oluphucula ukusebenza kwesithuthi, ukunciphisa ukunxiba kwamatayara kunye nokugcina ukusetyenziswa kwegesi.
● OkuUmgangatho weDigital Tire Gaugeixhotyiswe ngombhobho womoya obhetyebhetye kunye ne-360 degree swivel foot foot chuck, ekwazi ukujikeleza ukufikelela kwiivalvu zamatayara ngokulula & nokubhetyebhetye ngaphandle kokuvuza.Inceda ukwandisa ubomi bamathaya, ukuphucula uqoqosho lwamafutha.
● Umqheba ohlanganisiweyo we-ergonomic, ongeyotyhefu, ongenavumba kwaye uyahambelana nokusingqongileyo.Intonga yokudibanisa isinyithi ene-Chrome plated kunye ne-swivel design ayigugi kwaye iqinile.Iyahambelana ne-RV / Truck tire valve stem, eya kugcina uxinzelelo oluchanekileyo lwetayara, ukunciphisa ukuguga kwetayara kunye nokwandisa ubomi betayara
● Ichuck yesondo entloko ezimbini (ukutyhala) yenza umlinganiselo ube lula xa isiqu sevalve yetayara simi ngendlela eyahlukileyo, amatayara angaphakathi nangaphandle amatayara elinye nambini.I-air chuck yetayara ejikelezayo inokufakwa kwiimoto ezininzi, ngakumbi kwiilori, iitreyila kunye nee-RVs.Undoqo wevalve yenziwe ngobhedu oluqinileyo, olukwaziyo ukumelana nomhlwa kwaye lula ukwenza itywina ngesiqu sevalvu.Ukufundwa kwi-0.1 PSI increment, ukunika ufundo olukhawulezayo noluchanekileyo.Ukucwangcisa ngeeyunithi ezi-4: PSI, Bar, Kpa, Kg/cm.Uluhlu: 0-230 PSI okanye 0-16 Bar.
● Iqhosha elinye elisebenzayo, elilungele ukutshintsha phakathi kweeyunithi ezine ngokulula ngokucofa iqhosha ngobunono.I-Digital Dual Head Tire Gauge ifakwe isibane se-LED.Isikrini se-LCD esinokukhanya ngasemva kulula ukulinganisa nokufunda nokuba sekumnyameni.
● Uluhlu olubanzi lokulinganisa uxinzelelo: 0 - 230 PSI, eyenzelwe ngokukodwa izithuthi ezinzima kwaye inceda ukugcina uxinzelelo oluchanekileyo lwetayara, ukunciphisa ukuguga kwamatayara kunye nokwandisa ubomi benkonzo yetayara.Umngxuma ojingayo ekupheleni kunye neprofayile encinci ikulungele ukugcina okanye ukuxhoma naphi na, ukonga indawo.
● Igeji yedijithali yentloko yesondo ephindwe kabini enikwa amandla ziibhetri ze-2 AAA, yenza ukuba isetyenziswe ixesha elide.Kulula ukuyibuyisela ngokususa ikhava yangasemva.Igeyiji yesondo lemoto iya kuzicima ngokuzenzekelayo kwi-30s ngaphandle kokusebenza.Igeyiji yedijithali yentloko ephindwe kabini inokuthi icinywe ngesandla ngokubamba iqhosha lamandla kwii-5s.Ukusetyenziswa okuguquguqukayo kweemoto, iilori, iveni, iPick-Up, itrektara njl.
● Ukuqhubela phambili: I-Quality Digital Tire Gauge enobuso be-LED kunye nokulinganisa phakathi kwe-5 kunye ne-150 psi.
● Ukusetyenziswa ebusuku: Incam ekhanyisiweyo eyenza ukujonga uxinzelelo lwetayara ebusuku ngokukhawuleza kwaye kube lula
● Ukhululekile: I-ergonomic grip yokuphatha lula kunye nokhuseleko lwe-digital tayara gauge.
● Ukuguquguquka: Imilinganiselo yoMgangatho weDigital Tire Gauge kwi-psi, kPa kunye nebar
● Ukuthembeka: Kubandakanya ukuvala ngokuzenzekelayo kunye nebhetri ehlala ixesha elide
● Uthungelwano olungatyibilikiyo kwaye lwenza kube lula ukubamba
● Iqokobhe leplastiki yobunjineli lizilungele zombini izandla zamadoda nabasetyhini
● Yenzelwe ukugcina uxinzelelo olululo lwetayara, ukunciphisa ukudinwa kwamatayara nokwandisa ixesha lamatayara kwakunye nokonga ukusetyenziswa kweoli
● Imilinganiselo yeCandelo loxinzelelo lwe-PSI, i-BAR, i-KPA, kunye ne-KGF/CM2 kwi-Schrader Valves ukuya kwi-150PSI |1000kPA |Ibha ye-10 |10kg/cm2
● Isikrini sokubonisa i-LCD esikhanyayo kunye nomlomo oKhanyisiweyo ubonelela ngokubonakala okucacileyo nakwiisetingi zokukhanya okuphantsi okanye ebusuku
● Cofa iqhosha elithi "ON/UNIT/OFF" ukuze ulawule;icime ngokuzenzekelayo kwimizuzwana engama-30 yokungasebenzi
● IUmgangatho weDigital Tire Gaugeingasetyenziselwa ukulinganisa iimoto, iibhayisekile, iibhola, izikhitshane zerabha kunye nezinye iimveliso.Inoluhlu olubanzi losetyenziso kwaye izisa uhambo olukhuselekileyo nolusempilweni.
● Ngomboniso we-LCD we-backlit eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nomlomo okhanyayo, i-digital tayara gauge yoxinzelelo ibonakala kwiindawo ezikhanyayo kwaye inceda ukulungelelanisa umbhobho kwivalve yokutywinwa okulungileyo.
● Umboniso wedijithali wokufundwa okucacileyo kunye nokuchanekileyo ngokuchaneka okuphezulu kumanyathelo e-0.1.Iiyunithi ezi-4 ezinoluhlu: 0-150 PSI / 0-10 bar / 0-10 kg / cm² okanye 0-1000 KPA;Akusekho ukuqikelela ngezixhobo zokulinganisa i-analog.
● Iqhosha elinye elinemisebenzi emi-3: ON / UNIT / OFF, i-texture engatyibilikiyo kunye ne-ergonomic handle yenza kube lula ukuyibamba.Ukucinywa okuzenzekelayo kwimizuzwana engama-30 ukonga umbane.
● Lungelelanisa umqhagi kwivili, uze ulicinezele ngokuqinileyo ukugcina umoya uqinile.IUmgangatho weDigital Tire Gaugeibonisa ngokuzenzekelayo ixabiso elilinganisiweyo.
● Ubuncinci boMyalelo woMda: 2,000pcs